» भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) श्रीमानको कालो कर्तुत बाहिरीए पछि” छोरिको कसम आत्मा हत्या गर्छु ” भन्दै आइन मिडियामा, के गर्थे उनका श्रीमान ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित) भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) श्रीमानको कालो कर्तुत बाहिरीए पछि” छोरिको कसम आत्मा हत्या गर्छु ” भन्दै आइन मिडियामा, के गर्थे उनका श्रीमान ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) श्रीमानको कालो कर्तुत बाहिरीए पछि” छोरिको कसम आत्मा हत्या गर्छु ” भन्दै आइन मिडियामा, के गर्थे उनका श्रीमान ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ । चियावालीका नाममा अहिले सामा’जिक सञ्जालमा चर्चामा रहकी श्रृष्टि तामा’गंको घरभेटी निकै सहयोगी रहेछन् । श्रीमानले अलपत्र पारेपछि दुई वर्षकी छोरी काखमा बोकेर उनी रातभरी का’ममा खटिन्थिन् । दुई वर्षकी छोरी पिठ्युमा बोकेर राती ३ वजे उठेर काममा लागेको भिडियो सार्व’जनिक भएपछि उनी चर्चित भएकी हुन् । उका श्रीमानको बारेमा भने अर्को ठूलो रहस्य खुलेको छ । उनले इराक पठाइदिन्छु भन्दै गाउँका धेरैलाई समस्यामा पारेका कार’ण अहिले सम्पर्क विहिन भएको थाहा भएको हो ।
श्रृष्टिका श्रीमानले इराक ल’गिदिन्छु भन्दै गाउँका साझालाई ठ ग्ने गरेको खुलेको छ । उनले गाउँका युवा युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर विदेश पठा’इदिछु भन्दै पैसा उठाएको प्रमाण फेला परेको हो । श्रृष्टिवारे भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनका श्रीमानका बारेमा खोजी सुरु भएपछि बुद्धिले समस्यामा पारेकाहरु पनि मिडि’यामा आएका हुन् । उनीहरुले श्रृष्टिको श्रीमानले पैसा लिएर विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगेको भन्दै कागज देखाउँदै सार्वज’निक भएका छन् ।